आज हङकङमा स्थानिय ३४२ जनामा कोरोना संक्रमित फेला परेका छन - Gulmeli Online TV
२३ माघ २०७८, आईतवार २१:०५
नारायण भण्डारी हङकङ ६ फेब्रुअरी २०२२
हङकङ स्वास्थ्य संरक्षण केन्द्रका प्रवक्ता डा. चुआङ सुक-क्वानले आज साँझ ४.३० बजे पत्रकार सम्मेलनमा हङकङमा ३४२ नयाँ स्थानीय कोभिड-१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताएता छन। आजका सबै स्थानीय केसहरू मध्ये १०० पहिलेका केसहरूसँग जोडिएका थिए। करिब २० केसहरू डेल्टा भेरियन्ट हुन। हङकङमा हालसम्म जम्मा केसहरूको सङ्ख्या १५ हजार ४०८ पुगेको छन।
डा. चुआङले मेइ शेक हाउस, शा तिनको शेक मुन इस्टेटको युनिट ०७ बाट फैलिएको हुन सक्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुनसक्ने बताए। ११ जनामा ​​कोभिड-१९ पत्ता लागेको थियो, र १ जनालाई प्रारम्भिक केसको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थियो। प्रसारण पनि टुएन मुनको हिङ ताई हाउस, ताई हिङ एस्टेटको युनिट ०६ र १० मा भएको आशंका गरिएको छ। बासिन्दाहरूलाई पनि विस्थापित गर्न आवश्यक छ।
युएन लङ प्लाजामा क्लिनर, सेक्युरिटी गार्ड, सेल्सपीपल र रेष्टुरेन्ट स्टाफ सहित १३ जना कर्मचारीलाई कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएको थियो। क्वारी हिलको ५१ शेउङ शिङ स्ट्रिटमा रहेको साहक लोहास गार्डेनमा भान्छा, नर्स र अन्य कर्मचारीसहित २ जनामा ​​पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएको छ भने अन्य २ जनालाई प्रारम्भिक सङ्क्रमणको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। संक्रमितको संख्या अनुसन्धान भइरहेको छ । परिसरको पहिलो र तेस्रो तल्लामा रहेका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। थप रूपमा, त्यहाँ एक बिरामी थिए जसले धेरै चन्द्र नयाँ वर्षको डिनर पार्टीहरूमा भाग लिएका थिए र पो लिन मठ र चे कुङ मन्दिरको भ्रमण गरेका थिए। डा. चुआङ चिन्तित छन् कि यी ठाउँहरूमा प्रकोपको जोखिम हुनेछ।
उच्च रक्तचाप भएका ८४ वर्षीय पुरुष बिरामी (केस नम्बर १४८१४) डेल्टा भेरियन्ट भाइरसबाट संक्रमित थिए र उनले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएका थिएनन। उनलाई गत बिहीबार रुघाखोकी र थकानका कारण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो तर आज उनको अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सघन उपचार कक्ष (ICU)मा भर्ना गरिएको हो ।
आज बिहान ९ बजेसम्म विगत २४ घण्टामा कुल १३८ पुष्टि भएका बिरामी निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म १३ हजार १२५ जना डिस्चार्ज भएका छन । हाल १ हजार ४ सय ९५ बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
यस महामारीको फैल्याउने २ स्रोत छन, क्वारेन्टाइन होटल क्लस्टरमा ७६८ केसहरू छन्, र ह्यामस्टर क्लस्टरमा ८४ केस छन। विगत २ हप्तामा, त्यहाँ १,९२१ पुष्टि भएका केसहरू छन्, र अज्ञात स्रोतहरूका ३२० भन्दा बढी केसहरू छन्, जसमध्ये ८०% भन्दा बढी ओमिक्रोन भेरियन्ट भाइरससँग सम्बन्धित छन्।